Mfe 2012 Afrenhyia Nhyiamu Ho Amandzɛɛbɔ | Jehovah Adasefo
KENKAN WƆ Albanian Armenian Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Konkani (Roman) Korean Lithuanian Malagasy Mfantse Nahuatl (Central) Norwegian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Uzbek (Roman) Valencian Zulu
Afrenhyia Nhyiamu Ho Amandzɛɛbɔ
“Edziban Wɔ Ber A Ɔsɛ Mu”
Afrenhyia nhyiamu a otsĩa 128 a Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yɛe no ase no, etsiefo a hɔn dodow yɛ mpempem pii no tsiee amandzɛɛbɔ ahorow a ɔhyɛ nkuran nye Matthew 24:45-47 ho nkyerɛkyerɛmu a ɔtɔ asomu a wɔdze mae no.
Wɔyɛɛ dɛm nhyiamu yi wɔ October 6, 2012 mu wɔ Jehovah Adasefo Ehyiadzi Asa a ɔwɔ Jersey City, New Jersey, U.S.A., na nyimpa a hɔn dodow reyɛ edu 5,000 na wɔkɔr ase. Ber kor no ara mu no, wɔdze dwumadzi no faa Intanɛt do ma nyimpa bɔbor 10,000 hwɛe wɔ hɛn edwumayɛbea ahorow a ɔwɔ Canada, Brooklyn, Patterson, nye Wallkill, New York.
Anthony Morris a ɔyɛ Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no munyi na ɔyɛɛ nhyiamu no eguamutsenanyi. Ɔkãa afrenhyia nhyiamu ahorow bi a etwa mu a ɔhyɛ nkuran, na werɛ nnkefir da no ho asɛm. Nna etsiefo no nyim dɛ afe yi afrenhyia nhyiamu no bɛyɛ dza ɔhyɛ nkuran. Naaso, ber kor no ara nna woribisa hɔnho dɛ, ‘Ana ɔbɛyɛ dza hɛn werɛ nnkefir so?’
Woyii video ebien ma etsiefo no hun edwuma a yɛreyɛ wɔ wiadze nyina.
Ahendzi Asa A Wosisi:
Video no maa etsiefo no hun Ahendzi Asa a yesisi wɔ aman ahorow a wonnyi sika pii mu no. Mfe 13 a etwa mu no, Kuw a Wosisi Ahendzi Asa esisi Ahendzi Asa bɔbor 25,402 wɔ aman a ɔtsetse dɛm mu. Sɛ wɔkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛr a, wosi Ahendzi Asa bɔbor enum da biara! Ntoboa a Adasefo a wɔwɔ wiadze nyina eyi no na wɔdze sisii Ahendzi Asa ahorow yi. Dza ɔkã ho bio nye dɛ sɛ atoyerɛnkyɛm si a, dɛm kuw ahorow yi a hɔnho awea wɔ adansi mu no yɛ ntsɛm kɔboa hɔn a esian ato hɔn no ma wosiesie anaa wɔsan si hɔn Ahendzi Asa no fofor nye hɔn efie a asɛɛe no.
Mfe 2012 mu no, Jehovah Adasefo yɛɛ ehyiadzi etsitsir ma nkorɔfo a wofi aman ahorow do kɔr bi. Ebɛn sorbi na ɔda dɛm ehyiadzi ahorow yi nye amanaman ntamu ehyiadzi a wɔayɛ wɔ mfe bi a abɛsen kɔ mu?
Wɔkyerɛɛ mu wɔ video no mu dɛ, ɔnnyɛ edwumakuw a wɔyɛ akwantu ho nhyehyɛɛ na wɔyɛɛ dabew, kar, nye edziban ho nhyehyɛɛ maa enuanom a wofi aman ahorow do wɔ dapɛn a wɔyɛɛ nhyiamu no, na mbom nkorbata edwumayɛbea a wɔwɔ aman a wɔyɛɛ nhyiamu no wɔ hɔ no na wɔyɛɛ dɛm nhyehyɛɛ yi nyina. Enuanom a aka kakra ma hɔn dodow ayɛ 1,500 na wɔkɔr ehyiadzi no mu biara.
Ɔnnyɛ ehyiadzi no ase nko na enuanom a wofi aman ahorow do no nyaa ho kwan pii nye Adasefo a wofi aman a wɔyɛɛ ehyiadzi no wɔ mu no bɔɔ fɛkuw, na mbom ber a wɔnye hɔn bɔɔ mu kɔr aprɔw, wɔnye hɔn too nsa dzidzii, nye ber a wɔnye hɔn bɔɔ mu kɔr asɛnka so. Wɔkãe wɔ video no mu dɛ, “Ehyiadzi etsitsir a wɔayɛ nyina mu no, ɔdɔ a ɔyɛ emudzi abɔdo no na ada enuadɔ ankasa a enuanom wɔ no edzi.”
Ber a wɔbɔɔ amandzɛɛ dɛ wɔ ehyiadzi yi ekyir no, Jehovah Adasefo bɔkɔ do ayɛ ehyiadzi etsitsir a ɔtse dɛm afe biara wɔ aman afofor do wɔ wiadze nyina no, etsiefo no enyi gyee papa!
Afrenhyia nhyiamu no mu nsɛntsitsir no bi na odzidzi do yi:
Nsɛm A Wobisabisa:
Nkorbata Egyinatukuw mufo baasa nye hɔn yernom kãa mbrɛ Jehovah Nyankopɔn atsetse hɔn ma woetum edzi dwuma ahorow pii wɔ no som mu ho asɛm. Sɛ wɔka mfe dodow a hɔn nyina dze ayɛ ber nyina som edwuma no bɔ mu a, ɔyɛ mfe 342.
Richard Kelsey a ɔyɛ Germany Nkorbata Egyinatukuw no munyi no kãa dɛ Skuul a wɔyɛ ma Nkorbata Egyinatukuw Mufo nye Hɔn Yernom no maa ohun dɛ “ɔwɔ dɛ odzi Jehovah n’akwankyerɛ do ber nyina.” Jehovah yɛ Egya a ɔwɔ dɔ, na hɛn eyiedzi na ɔrohwehwɛ. Onua Kelsey kyerɛɛ mu dɛ, “Jehovah pɛ dɛ yɛtsena ase daa, na ɔreyɛ biribiara a ohia dze ahwɛ hɛn.” Wɔkyerɛkyerɛɛ Nkorbata Egyinatukuw mufo no wɔ skuul no mu dɛ ɔwɔ dɛ wosũasua Jehovah no nhwɛdo a ɔdɔ wɔ mu no.
Ber a wɔtoo nsa frɛɛ Linda Johansson dɛ ɔnkɔ Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul wɔ afe 1958 mu no, nna wonumaa no no oenya mfe ebien na fã pɛr. Nkyii so, nna ɔawar afe kor. Akyerɛbaa Johansson kãa dɛ, “Woara hwɛ, dɛ menye enuanom mbarimba a hɔnho akokwaa na wɔwɔ suahu pii rokɔ skuul. Dza ɔbaa m’adwen mu nye dɛ ‘memmfata dɛ meba ha.’”
Naaso, Akyerɛbaa Johansson yeer noho, na wowiee skuul no wɔdze ɔno nye no kun kɔr Malawi ma wɔkɔsomeee dɛ asɛmpatserɛwfo wɔ hɔ. Ɔmmfa ho ɔtaa a n’ano yɛ dzen a wɔdze baa Jehovah Adasefo do wɔ dɛm ɔman no mu no, ɔnye aban soafo bi a mber bi a etwa mu no nna ɔsoɛr tsia asɛnka edwuma a Adasefo yɛ no sũaa Bible no. Ndɛ a yɛrekasa yi, dɛm ɔbarimba no ne yer, ne babanyin, nye ne babaa, hɔn nyina abɛyɛ Adasefo a woenuma hɔn.
Enuanom baanan a woewie Bible Skuul a wɔyɛ ma Christianfo Awarfo (Bible School for Christian Couples) no nye Jehovah Adasefo hɔn ɔmansin do hwɛfo bi a ɔwɔ New York kãa suahu ahorow a wonyae ho asɛm. Nna ɔfa mbɔdzen a wɔbɔe dɛ wɔbɛkã asɛm no wɔ mbea a nyimpa pii dzi hɔ akɔnaaba no ho.
Ber nyina asomfo a wɔyɛ Jehovah Adasefo dze pon nye trɔk a Bible ho nwoma ayɛ do mã sisi mbeambea a nyimpa pii dzi hɔ akɔnaaba no. Nyimpa a worutwa mu no botum eyi nwoma no bi, ebisa Bible ho nsɛm, na wɔaaserɛ ma wɔnye hɔn ayɛ Bible adzesua ho nhyehyɛɛ.
Adasefo a wɔwɔ New York City, Chicago nye Los Angeles afã bi mu no rosɔ kwan fofor yi a wɔfa do kã asɛm no kyerɛ nkorɔfo ahwɛ. Afe kor pɛr mu no, nyimpa a wɔbaa pon nye trɔk a wɔdze esisi hɔ no ho no, hɔn mu 2,700 na wɔserɛe dɛ wɔnye hɔn nyɛ Bible adzesua a wɔnngye hwee ho nhyehyɛɛ.
Mbofra Toow Ndwom:
Nyimpa piinara na wosũi ber a mbofra 17 toow ndwom a n’etsifi asɛm nye dɛ “Dzi Asɛm No Do Na Nya Nhyira.” Woyii ndwom no fii Sing to Jehovah (Tow Ndwom Ma Jehovah) ndwom nwoma no mu (Ndwom a Otsĩa 120).
Dza odzi hɔ wɔ dwumadzi no mu nye ɔkasa a wɔakyekyɛ mu esia a Akwankyerɛ Kuw no mufo beesia a wodzidzi do yi mae no: Onua Jackson, Onua Lösch, Onua Pierce, Onua Herd, Onua Lett, nye Onua Splane. Wɔkyerɛkyerɛɛ Jesus ne nsɛm a wɔakyerɛw wɔ Matthew 24:45-47 no mu. Jesus kãe wɔ hɔ dɛ:
“Woana mbɔ nye akowaa nokwafo nye nyansafo a no wura dze no esi ne fikuw do, dɛ ɔmma hɔn edziban wɔ ber a ɔsɛ mu? Nhyira akã akowaa no a, sɛ no wura ba a, obohu no dɛ ɔreyɛ dɛm, nokwar mese hom dɛ ɔdze no besi n’adze a ɔwɔ nyina do.”
Woyii nsɛmbisa a odzidzi do yi ano wɔ ɔkasa a wɔakyekyɛ mu no mu:
Ebɛn Aber Na Jesus Dze “Akowaa Nokwafo Nye Nyansafo” No Sii Ne Fikuw Do?
Ma yensusu asɛm a Jesus kãe wɔ Matthew tsir 24 no ho nhwɛ. Nyiyimu a wɔatwe adwen esi do wɔ ha nyina benya mbamu wɔ Christ ne mbae no mu, kyerɛ “wiadze ewiei” mber yi mu.​—Nyiyimu 3.
“Nda no mu ahohia.”​—Nyiyimu 29.
“Mbasantsen yi.”​—Nyiyimu 34.
“Da no nye dɔn no.”​—Nyiyimu 36.
Da no “a hom wura bɛba.”​—Nyiyimu 42.
“Dɔn a hom nnsusu mu na nyimpa Ba no reba.”​—Nyiyimu 44.
Ntseasee wɔ mu dɛ yɛbɛkã dɛ Christ ne mbae no hyɛɛ ase wɔ afe 1914 mu, na iyi ekyir no na wɔdze “akowaa nokwafo nye nyansafo” no sii hɔ.
Jesus kyerɛɛ mu dɛ wɔdze dɛm “akowaa” yi besi hɔ wɔ ber a noho ebehia dɛ wobisa asɛm a ɔnye dɛ: “Woana mbɔ nye akowaa nokwafo nye nyansafo no?” Nna Jesus n’asomafo no wɔ sunsum krɔnkrɔn akyɛdze ahorow no bi. Sɛ dɛm ber no na wɔdze akowaa no sii hɔ a, nkyɛ dɛm asɛmbisa yi nnkɔsoɛr wɔ hɔn aber do. (1 Corinthfo 14:12, 24, 25) Kaansa wɔdze sunsum krɔnkrɔn seraa asomafo no nye tsetse Christianfo mpo a, nna nnyɛ hɔn nye “akowaa nokwafo nye nyansafo” a Jesus hyɛɛ no ho nkɔm no.
Dɛm ntsi, ɔtɔ asomu dɛ yɛbɛkã dɛ Jesus dze “akowaa nokwafo nye nyansafo” no sii “ne fikuw” do wɔ ne mbae no mu, kyerɛ “wiadze ewiei” mber yi mu.
“Woana Mbɔ Nye Akowaa Nokwafo Nye Nyansafo” No?
Nna ɔnnyɛ nyimpa kortsee ho asɛm na Jesus rekã, na mbom nyimpakuw bi a wɔbɔsom dɛ “akowaa” ho asɛm na ɔrekã. Nna wɔbɛyɛ edwuma abɔ mu dɛ kuw. Jesus kyerɛɛ mu dɛ (1) wɔdze akowaa no besi hɔ dɛ ɔhwɛfo wɔ no “[wura] ne fikuw” do, na (2) ɔaama fikuw no mufo sunsum afamu “edziban wɔ ber a ɔsɛ mu.”
Ofitsi afe 1919 reba no, nyimpakuw kakraabi a wɔdze sunsum krɔnkrɔn asera hɔn no akɔ do asom wɔ Jehovah Adasefo hɔn wiadze nyina edwumayɛbea tsir hɔ. Dɛm nyimpakuw yi akɔ do ahwɛ asɛnka edwuma a wɔreyɛ wɔ wiadze nyina no do, na wosiesie sunsum afamu edziban kyekyɛ ma hɔn wura ne fikuw mufo no. Mfe kakra a etwa mu mu no, ndzɛmba ada edzi dɛ Jehovah Adasefo Akwankyerɛ Kuw no na woridzi dɛm dwuma yi.
Adanse a yesusu ho yi ma yehu dɛm nokwasɛm yi: Wɔdze “akowaa nokwafo nye nyansafo” no sii Jesus ne fikuw do wɔ afe 1919 mu. Akowaa no yɛ nyimpakuw kakraabi a no mufo yɛ mbarimba a wɔasera hɔn a wɔsom wɔ wiadze nyina edwumayɛbea tsir hɔ wɔ Christ ne mbae no mu. Dɛm nyimpakuw yi ara so na wosiesie sunsum afamu edziban kyekyɛ ma hɔn wura ne fikuw mufo. Dɛm nyimpakuw kakraabi yi dzi dwuma dɛ “akowaa nokwafo nye nyansafo” no ber a wɔbɔ mu yɛ edwuma dɛ Akwankyerɛ Kuw no.
Woananom Nye “Fikuw” No Mufo No?
Jesus kãa dɛ wɔbɛma “ne fikuw” no mufo no “edziban wɔ ber a ɔsɛ mu.” Jesus n’ekyirdzifo anokwafo nyina nya sunsum afamu edziban fi “akowaa nokwafo nye nyansafo” no hɔ. Sɛ yerutwa no tsiabaa a, Christ n’esuafo nyina, dɛ wɔyɛ hɔn a wɔasera hɔn anaa “nguan” fofor no mufo no, hɔn nyinara yɛ “ne fikuw” mufo.​—John 10:16.
Ber a ɔkasafo no kyerɛkyerɛɛ Jesus no nkɔnhyɛ no mu wiei no, etsiefo no dze nsamubɔ kɛsenara gyee do. Dwumadzi no ekyir no, nyimpa pii kyerɛɛ enyisɔ a woenya dɛ Jesus kan hɔn kã “ne fikuw” no mufo ho.
Ebɛn Aber Na Jesus Dze Akowaa No Besi “N’adze A Ɔwɔ Nyina Do”?
Jesus kãa dɛ sɛ akowaa no “no wura ba a” (a dza ɔkyerɛ ankasa nye dɛ “ɔaba”), ɔdze no besi “n’adze a ɔwɔ nyina do.” Ebɛn aber na Owura no, kyerɛ Jesus, bɛba?
Asɛm a wɔkyerɛɛ ase “ba” no nye Greek kasafua erʹkho·mai dzi nsɛ. Wɔsanee so kyerɛɛ kasafua fofor a ɔnye erʹkho·mai dzi nsɛ ase dɛ “bɛba” anaa “reba.” Yehu iyi wɔ tsir 24 nyiyimu 42 nye 44 no mu. Jesus ne ba a ɔreba dɛ Ɔtsɛmbuafo wɔ ahohiahia kɛse no mu no ho asɛm na ɔrekã wɔ ha.​—Matthew 24:30; 25:31, 32.
Iyi so kyerɛ dɛ “akowaa” no a Jesus dze no besi “n’adze a ɔwɔ” do no bɛyɛ daakye asɛm. Ahohiahia kɛse no mu na Jesus dze no besi n’adze a ɔwɔ do.
Ebɛnadze Nye Jesus “N’adze A Ɔwɔ” No?
Jesus kãa dɛ: “Wɔdze sor nye asaase do tum nyina ama me.” (Matthew 28:18) Ntsi Jesus “n’adze a ɔwɔ” no nnyɛ asaase yi do ndzɛmba nkotsee. Messiah Ahendzi no so kã ho.​—Philippifo 2:9-11.
Ewiei koraa no, Jesus behyira “akowaa nokwafo nye nyansafo” no dze nam nyan a obenyan dɛm kuw no mufo ma wɔaakɛtsena sor no do. Ɔbɛsan ama hɔn tum dɛ ahemfo ma woeedzi Christ n’adze a ɔwɔ wɔ sor nye asaase yi do no do. Nhyira kor yi ara na wɔdze abɔ Christianfo anokwafo a wɔasera hɔn nyina no anohoba.​—Luke 22:28-30; Nyikyerɛ 20:6.
Wɔmaa nkaabɔ tsitsir bi wɔ ɔkasa a wɔakyekyɛ mu no ne fã a otwa tun no mu. Onua Splane kenkaan Jesus no nkuranhyɛsɛm a ɔwɔ Matthew 28:20 no, na iyi ekyir no ɔkãa dɛ: “Yɛwɔ siantsir fofor bi ntsi a ɔwɔ dɛ yenya ahotodo. Dɛm siantsir no puei wɔ mfe 2013 afe asɛm no mu. Ɔyɛ ebɛn asɛm a? Ɔno nye Joshua 1:9 no. Ɔkã dɛ: ‘Hyɛ dzen na nya akokodur; . . . [Jehovah] wo Nyankopɔn dzi w’ekyir.’”
Ber a Onua Morris dze dwumadzi no nyina reba ewiei no, obisaa dɛ, “afedan so ɛ? Wɔbɛyɛ afedan afrenhyia nhyiamu no October 5, 2013, na wɔdze bɛfa Intanɛt do akɔ Ehyiadzi Asa ahorow wɔ United States nye aman afofor a wɔkã Borɔfo kasa no do.”
Wɔbɛyɛ dwumadzi yi wɔ Borɔfo kasa mu nkotsee. Wɔnnkɛkyerɛ ase akɔ kasa afofor mu.
Ber a wɔdze dwumadzi a ɔtow gyedzi do, na werɛ nnkefir da yi baa ewiei no, etsiefo no fii hɔn akoma mu dze enyigye toow ndwom a n’etsifi asɛm nye dɛ, “Kan No Kɔ Do Hyerɛn” (Ndwom a Otsĩa 116). Ndwom yi fi Sing to Jehovah (Tow Ndwom Ma Jehovah) ndwom nwoma no mu. Ndwom no no mu nsɛm no bi na odzidzi do yi:
“Hɛn Ewuradze apaw n’akowaa nokwafo,
Ɔma hɛn edziban ber pa mu.
Nokwar kan no akɔ do ahyerɛn,
Akã nyimpa akoma nye adwen.”
Fa mona Fa mona Afrenhyia Nhyiamu Ho Amandzɛɛbɔ
October 2012 Afrenhyia Nhyiamu Ho Amandzɛɛbɔ
Video Tsiabaa: Afrenhyia Nhyiamu Dwumadzi​—October 2012